ယမန်နှစ် သင်္ကြန်နီးကာလ ခရီးသည် ၁၆ဝ ကျော် ကားလက်မှတ် လိမ်လည်ရောင်းချခံခဲ့ရသဖြင့် သတိပြု ဝယ်ယ? - Yangon Media Group
ယမန်နှစ် သင်္ကြန်နီးကာလ ခရီးသည် ၁၆ဝ ကျော် ကားလက်မှတ် လိမ်လည်ရောင်းချခံခဲ့ရသဖြင့် သတိပြု ဝယ်ယ?
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂ဝ
ယမန်နှစ် သင်္ကြန်နားနီးကာလအတွင်း အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်း၌ လူ ၁၆ဝ ကျော်ကားလက်မှတ်လိမ်လည်ရောင်းချခြင်း ခံခဲ့ရသဖြင့် ခရီးသည်များ သတိပြုဝယ်ယူကြရန် စည်ပင်(အ ဝေးပြေး)က နှိုးဆော်ထားသည်။ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်သင်္ကြန်နားနီးကာလတွင် လက်မှတ်လိမ်လည် ရောင်းချမှုများကြောင့် ခရီးသွားပြည်သူ ၁၆၅ ဦးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပြီး ၎င်းတို့ကို ယာဉ်လိုင်းသုံးလိုင်းမှ ကူညီ ပြေးဆွဲပေးခဲ့ရကြောင်း အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီမှ ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလွင်ထူးက ပြောသည်။
”ခရီးသွားပြည်သူဆိုတာတော့ သူသူကိုယ်ကိုယ် ဒီရက်ဆိုအိမ်ပြန်ချင်တာပေါ့။ ဒီလိုအချိန်ကိုအခွင့် ကောင်းယူပြီး Clipboard ဘုတ် ပြားထောင်ပြီး လမ်းမှာတင်ရောင်း ကြတယ်။ ခရီးသည်တွေက ဝယ်ပြီးသွားခါနီးကျမှ ဖုန်းလှမ်းဆက်တော့ အဲ့ဒီနံပါတ်တွေကတပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိတာတို့၊ ခေါ်မရတာတို့၊ကတ်ထဲ မှာပါတဲ့လိပ်စာသွားတော့လည်း အခန်းကြီးက ပိတ်ထားတာတို့ဒါ တွေဖြစ်တယ်”ဟု ၎င်းက မတ် ၁၉ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ ယခုနှစ်တွင် ထိုသို့အလိမ် ခံရခြင်းမျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် လူအသွားအလာများသည့် ကားဂိတ်လေးခုတွင် သတိပေးစာများ ကပ်ထားကြောင်း၊ ၂ဝ၁၈ခုနှစ်သင်္ကြန် နားနီးကာလအတွင်း အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းထဲ၌ (ထူးစေတနာ) ၉၆၉၊ စည်းလုံးခြင်းနှင့် မုံရွာသားဟူ၍ ကားဂိတ်အမည် ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ကာ လက်မှတ်လိမ်လည်ရောင်းချခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့လက်မှတ်လိမ်လည် ရောင်းချခြင်းကို ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ရေးအတွက် ရဲအင်အားပို မိုချပေးရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (YRTA) ထံတင်ပြထားကြောင်း YRTA (အ ဝေးပြေး) တာဝန်ခံဦးဘမြင့်ထံမှ သိရသည်။ ”ကားဂိတ်လည်းမရှိ၊ ကားမရှိဘဲ ဘုတ်ပြားလေးထောင်ပြီး လာ ရောင်းတဲ့သူမျိုးတွေ၊ သင်္ကြန်တွင်း ဝင်းထဲမှာလာဆွဲတဲ့ ကြားကားလေး တွေ၊ ကိစ္စတွေဒါတွေကို ယာဉ်ထိန်း ရဲ၊ နယ်မြေရဲ၊ ဒီရဲတွေကို ချထားပြီး တော့ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ရဲတွေကို ပို့ချပေးဖို့အတွက် ဖေဖော် ဝါရီလကပြုလုပ်တဲ့ YRTA အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြထားပြီးပြီ။ အဲ့ဒါကအခုထိတော့ အကြောင်းကြား စာမလာသေးဘူး”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း ကားလက်မှတ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ နှင့်ကြုံတွေ့လာပါက ကားနံပါတ်၊ လက်မှတ်ရောင်းချမှုဈေးနှင့် ရောင်း ချသည့်နေရာစသည့် အထောက်အထားနှင့်တကွ YRTA (အဝေး ပြေး)သို့ လာရောက်တိုင်ကြားရန် ဦးဘမြင့်က တိုက်တွန်းသည်။
”အရေးယူလို့ရလားဆိုတော့ ငါတို့ကအရေးယူလို့မရဘူး။ အရေးယူခွင့်လည်းမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ပြီဆိုရင် အထောက်အထားနဲ့တကွလာတိုင်၊ အရေးယူလို့ရတဲ့နေရာကို တင်ပြပေးမယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်း မှလက်မှတ်ပွဲစားတစ်ဦးကမူ သင်္ကြန်နားနီးကာလအတွင်း လက်မှတ်ဈေး တင်ရောင်းခြင်းမှာ သဘာဝကျသောကိစ္စဟုဆိုသည်။ ”လက်မှတ်ဈေးတင်ရောင်း တယ်ဆိုတာ ခရီးသည်ကလည်း အ ဆင်ပြေလို့ဝယ်တာပဲဗျာ။ ဒါကနှစ်ဦး နှစ်ဖက်အဆင်ပြေလို့ လုပ်တဲ့ကိစ္စပဲ။ နောက်ပြီးဆီဖိုးက ရှိသေးတယ်။ ခရီးကအသွားပဲ လူကကားပေါ်ပါတာလေ။ အပြန်ကျတော့လူမရှိဘဲ ပြန်မောင်းလာရတာ။ အဲ့ဒီအတွက်ပါ။ သူတို့လည်းယူမှာပေါ့။ အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့က ဘာပြောလို့ရမှာလဲ။ ဒါကိုသူတို့ဖမ်းလို့လည်းမရဘူး။ ထောင်ချလို့လည်းမရဘူး။ ဒီအချိန်ကတော့ ဒီလိုပဲလူကျပ်မှာပဲ။ ဒီလိုပဲလုပ်ကြ မှာပဲ”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ပြည်သူအများ ဝယ်ယူနိုင်သော အိမ်သုံးကားများကို အထူးကုန်စည်ခွန်လျှော့ချရန် လွှတ်တော်ဆုံးဖြတ??
ပုဂံ-ညောင်ဦးတွင်ဧရာဝတီမြစ်အလှနှင့် ညနေရှုခင်းကို ဆင်စီးကြည့်ရှုနိုင်ရန် ပလင်းကမ်းသာယာဆင်စ??
ကော်စတာ၏နေရာကို ဟီဂူအင်အစားထိုးနိုင်မည်ဟု ဟာဇက်ယုံကြည်၊ ရှက်ဖီးနှင့်အက်ဖ်အေဖလားပွဲတွင် ?
လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများရှိ နေအိမ်များကို အတင်းအကျပ် ရွှေ့ခိုင်းခြင်း မ??
အမေရိကန် အမျိုးသမီးဘောလုံး အသင်းကို လစာ တန်းတူညီမျှပေးရန် ဆန်ဒရာဘူးလော့ တောင်းဆို
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီးအား လွန်ဖြင့် ထိုးဖောက်ကာ ရွှေသင်္ကန်း ကပ်မည်ဆိုသည့် ပြောဆိုမှုများသည် မ??
ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ပထမဦးဆုံး လူသားမျိုးဥများ ပေါက်ဖွား